Modely PowerPoint MAIMAIMPOANA - Safidy isan-karazany | Famoronana an-tserasera
Encarni Arcoya | 11/09/2021 13:03 | dia midika hoe
Iray amin'ireo fitaovana mahazatra indrindra ho an'ny mpianatra, na any am-pianarana, na institiota na oniversite dia tsy misy isalasalana fa PowerPoint. Azon'izy ireo atao ny manao ireo sary mihetsika hanolorany lohahevitra amin'ireo mpiara-mianatra aminy, na hoe tokony hatolony an'ireo mpampianatra azy ireo. Ao anatin'ny programa dia afaka mahita ianao modely teboka herinaratra Ahoana anefa raha te hanana tena izy ianao?
Soa ihany fa nieritreritra an'izany izahay, mba hanomezana sento mamorona azy io ary tsy ho olon-tsotra intsony ka ho tsara kokoa ny asanao. Te hahafantatra ve ianao? Topazo maso ireo maodely PowerPoint izay hitanay fa azonao ampiasaina amin'ny asanao, na matihanina io na amin'ny fanabeazana. Azo antoka fa amin'izay no hisarika ny sain'izay mahita azy ireo.
1 Maninona no miloka amin'ny modely Powerpoint voalohany
2 Ny modely Power point tsara indrindra hialana amin'ny mahazatra
2.1 Modely fampisehoana miaraka amin'ny faribolana maro loko
2.2 Modely tsipika avana
2.3 Modely teboka Power Power
2.4 Modely teboka herinaratra any Canva
2.5 Fampisehoana fialantsasatra mampihomehy
2.7 Modely teboka herinaratra ho an'ny vokatra
2.8 Fampisehoana marika
2.9 Modely Power Point fampisehoana kanto
2.10 Fampisehoana ho an'ny vokatra
2.11 Modely ho an'ny orinasa
2.12 Modely PowerPoint ho an'ny trano fisakafoanana
Maninona no miloka amin'ny modely Powerpoint voalohany
Raha manana ny programa Powerpoint ianao, dia normal be raha manana modely ao ianao ary mampiasa azy ireo amin'ny asanao. Na izany aza, raha manomboka manao zavatra be dia be ianao dia mety ho toa miverimberina, satria ny hany loko novainao dia ny loko sy ny soratra.
Taloha, ary nandritra ny fotoana fohy, ity tena hita tsara izany satria tamin'izany fomba izany dia nitovy endrika ny tetik'asa rehetraary koa ny asa, ary tsy nisy fanavahana. Saingy, tamin'ny fandehan'ny fotoana dia nanomboka nisafidy ny olona, ​​leo ny mahita ny mahazatra, ary nanomboka nahatsikaritra izy ireo, miaraka amin'ny fiovana kely dia nahazo fifandraisana bebe kokoa, dinamika bebe kokoa, sns.
Ankehitriny ny manana maodelim-pahefana Powerpoint izay tsy mamela ny solosaina hatao fotsiny ny lahatsoratra, fa koa handravaka azy ary hahatonga ny mpijery hifantoka amin'ny antsipiriany izay resahina, dia mahomby kokoa. Ataovy ao an-tsaina fa tsy maintsy miavaka amin'ny vahoaka ianao ary noho io famoronana io dia ampahany manandanja lehibe hanatanterahana izany. Inona koa, fampisehoana Powerpoint dia fifandraisana voalohany amin'ny mpihaino anao, Ary mety hisy fiantraikany amin'ny fahombiazana na tsy fahombiazan'ny asanao rehetra izany. Ka maninona raha manana modely tsara tarehy sy mampanankarena ny tetikasanao?
Ny modely Power point tsara indrindra hialana amin'ny mahazatra
Manaraka izany dia hanome ohatra maodely fampisehoana Powerpoint ianao mba tsy hijanonanao amin'ny zavatra mitovy foana.
Modely fampisehoana miaraka amin'ny faribolana maro loko
Amin'izany ianao dia ho afaka hanome endrika mavitrika kokoa sy falifaly kokoa amin'ireo tetikasanao. Mampatsiahy betsaka an'i Google izy io, indrindra ho an'ny faribolana sy loko, ka amin'ny tetik'asa mifandraika amin'ny teknolojia, Internet, pejin-tranonkala, sns. mety hahomby be.
Azonao atao ny misintona azy eto.
Modely tsipika avana
Azo ovaina tanteraka izy io ary afaka manova ny sary sy ny lahatsoratra ianao. Ho fanampin'izay, manana ianao Tsary 25 hafa, mba hahafahanao manamboatra azy araka ny itiavanao azy. Izy io koa dia manana sary masina 80 sy sarintanin'izao tontolo izao ahafahanao manova ny loko sy ny habe hanamboarany azy.
Azonao atao ny misintona azy eto:
Modely fanolorana tsipika avana
Modely teboka Power Power
Tamin'ity indray mitoraka ity dia nieritreritra iray miaraka aminay izahay fikitika taloha sy kanto, miaraka amina glamor sy nostalgia iray miaraka. Mety ho an'ny famelabelaran-kevitra izay mifantoka tsy dia ny ho avy sy ny maoderina, fa ny fitehirizana izany rivotra mampihetsi-po sy mafana izany amin'ny serivisy na vokatra.
Modely fampisehoana an-tsehatra miaraka amin'ny tabilao
Modely teboka herinaratra any Canva
Amin'ity tranga ity dia tsy miresaka modely manokana izahay fa momba ny toerana hahafahanao mahita modely Powerpoint samihafa hisafidianana. Manana modely samihafa ianao arakaraka ny tanjon'ny tetikasanao, na ho an'ny famerenana, amin'ny tambajotra sosialy, amin'ny dokam-barotra, amin'ny fampisehoana. Sns Ny zavatra tsara dia izany Malalaka izy ireo, ny sasany amin'izy ireo ihany no homena vola.
Fampisehoana fialantsasatra mampihomehy
Mety amin'ny fampisehoana tetik'asa fitsangatsanganana, ohatra ho an'ny orinasan-dia, hotely, trano fisakafoanana sns.
Ho hitanao ireo sary mihetsika endrika sy voaomana ka ny sary sy ny soratra tokony apetrakao ihany no tsy maintsy ampidirinao. Toa tena tsara ary omena laharam-pahamehana ny sary noho ny lahatsoratra satria ny tadiaviny dia ny misarika ny saina amin'ny alàlan'izy ireo.
Raha ny tadiavinao dia maodely matanjaka kokoa Powerpoint izay mijery amina fomba tena matihanina, nefa tsy mankaleo sy manjavozavo, dia manana an'ity ianao. Ny loko lehibe dia manga, ka raha tianao io dia efa manana zavatra azonao ianao, na dia ny tena marina aza dia azo ovaina amin'ny loko efatra. Manana koa Modely 45 hafa hampifanarahana ny asanao amin'ny fahalavorariana.
Modely teboka herinaratra ho an'ny vokatra
Raha mila manangana a fampisehoana miorina amin'ny sary, satria mety ho vokatra (trano, efitrano, haingon-trano sns) eto dia manana ny iray amin'izy ireo ianao. Izy io dia modely iray izay miavaka ny soratra fa, ambonin'izany rehetra izany, ireo sary.
Alohan'ny nilazanay taminao ny maodely tsara tarehy tsy tokony ho mankaleo na tsy hasiaka izy ireo, ary ohatra iray hafa anananao ity. Ao anatin'izany no hampiasanao loko manaitra kokoa, ary koa fotsy. Hanome anao fifandraisana mavitrika kokoa izy io ary tsy tokony ho ratsy, fa ho matihanina nefa miaraka amina "sparkle".
Modely Power Point fampisehoana kanto
Dingana manelanelana dia ity. Toa matihanina sy fototra kokoa izany, nefa miaraka amin'izay manasongadina singa sasany amin'ny slide hafa, izay ahafahanao manolotra tetik'asa matotra nefa misy fehin-tànana tsy manam-paharoa.
Fampisehoana ho an'ny vokatra
Iray amin'ireo modely Powerpoint azonao ampiasaina hampisehoana vokatra koa ity iray ity. A fampisehoana maimaimpoana mifantoka amin'ny famolavolana anatiny, na dia ny marina dia afaka mampiasa azy amin'ny zavatra maro hafa ianao.
Raha mitady hanolotra orinasa ianao nefa tsy dia ara-dalàna loatra, fa ny mifanohitra amin'izay dia azonao atao ny mieritreritra an'ity famelabelarana ity. Mampiavaka azy ny sary sy endrika tany am-boalohany, amin'ny aloky ny mena ary miaraka amin'ny fijery manome azy "zavatra" vahiny sy tatsinanana.
Modely PowerPoint ho an'ny trano fisakafoanana
Raha misy ifandraisany amin'ny trano fisakafoanana ny tetikasa miaraka amin'ny mpanjifanao dia ity no iray amin'ireo fampisehoana tsara indrindra azonao ampiasaina. Izy io dia maodely maoderina izay manana safidy samihafa hanehoana ara-bola, ekipa miasa, vokatra sns. Ho fanampin'izay azonao atao amboary amin'ny alàlan'ny fanovana ny karazana font, ny loko ary maro hafa.
Araka ny hitanao, misy maodely Powerpoint marobe, tsy maintsy mahita ilay mety tsara indrindra tadiavinao ianao. Tsy manoro hevitra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Template PowerPoint MAIMAIMPOANA